Strategy First University Risk Management – Strategy First University
Starting Date : 19 March 2020
Every Thursday : 6:00 pm to 8:30 pm
ICM Single Subject Diploma in Risk Management ဘာသာ ရပ် အတွက် သင်တန်းကြေးမှာ(465,000 ) ကျပ်ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Myaynigone Teaching Centre (U Wisara) -အမှတ် (၂၃၇)၊ ဦးဝိစာရလမ်း နှင့် ဓမ္မစေတီလမ်းဆုံ မီးပွိုင့်အနီး၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Lecturer – ဦးဝင်းသူအောင် , Master of Public Administration (University of Illinois, USA), B.A. Political Science (University of Nevada, USA), Stanford Certificate in Project Management
စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင်သာမက အခြားသောနယ်ပယ်တိုင်းတွင် ကြိုတင်မှန်းဆထားသော (သို့မဟုတ်) မမျှော်မှန်းထားသော ဆုံးရှုံးနိုင်ချေ/အန ္တရာယ်ရှိနိုင်ချေ (risks) ရှိသည်။ အခက်အခဲ မရှိသောလုပ်ငန်း (အလုပ်) ဟူ၍မရှိ။ Risk သည် အောင်မြင်မှုကို တွန်းအားပေးသော စွန့်စားမှု တစ်ရပ်လည်းဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် မမျှော်လင့်ထားသော Risk တစ်ခုကြောင့်လည်း လုပ်ငန်း၏အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်များကိုပါ ပျက်စီးနိုင်စေသည်။ ပေါ်ပေါက်လာမည့် Risk များကို ကြိုတင်ပြီး ဆန်းစစ်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ အစီအစဉ်များချမှတ်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း တို့ကို စနစ်တကျပြုလုပ်နိုင်မှသာ အခက်အခဲများကို အသုံးချ၍ အောင်မြင်မှုကို ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။
ထို့ပြင် Risk နဲ့ ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာ တင်သာမကပဲ စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးပေါ် ဆန်းစစ်ခြင်း (Business Analysis) ပါ သင်ကြားရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်လုပ်လိုသူများ သို့မဟုတ် လက်ရှိလုပ်ကိုင် နေသူများအတွက် အထူးပင်သင့်လျော်သော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ အရေးကြီးတာဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲနေရသော Manager များ၊ Project များ၊ Marketing manager များ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင် တာဝန်ယူနေရသော တာဝန်ခံများပါ တက်ရောက်သင့်သော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
– Analysing the business
– Understanding the business or project activity
– Understanding the primary processes and goals
– This includes the inputs (such as business objectives, financial reports, marketing plan)
– Constraints (such as the risk management plan)
– Mechanisms (such as the analysis tools, SWOT, PEST)
– Outputs (analysis findings)
– Examples of business processes include; marketing and sales, manufacturing, billing, training, facilities management and purchasing
– Identifying risk events and constructingarisk register
– PEST and SWOT analysis
– Risk questionnaire
– The risk register will include each risk event together with information on status, probability, impact and risk response action
– Risk assessment and evaluation. This stage looks at assessing the probability and likely impact of the risks identified. Decision trees. Pareto analysis. Expected Monetary Value (EMV). –Classifying risks into “high”, “medium” or “low”
– Producing action plans based on the risk assessment and evaluation stages
– Concept of risk appetite. Risk response strategies including; risk reduction and risk removal